Fadeexadii Soo Baxday Oo Neymar Jr Hooyadii Ku Qasabtay In Ay Daaqada Ka Tuurtay Jacaylkii Ay La Samaysatay Wiilka 23 Sano Jirka Ahaa. - Gool24.Net
Fadeexadii Soo Baxday Oo Neymar Jr Hooyadii Ku Qasabtay In Ay Daaqada Ka Tuurtay Jacaylkii Ay La Samaysatay Wiilka 23 Sano Jirka Ahaa.
24/04/2020 Mahamoud Batalaale
Dhawr todobaad ka hor waxaa warbaahinta ciyaraaha qabsaday jacayl ay Neymar Jr hooyadii la samaysatay lix sanadood ka yar wiilkeeda Neymar laakiin waxaa dareenka sii kordhisay markii ay Neymar iyo aabihii baraha bulshada kaga faaloodeen jacaylkan.
Laakiin muddo hal todobaad ah kadib waxaa soo baxday sheeko fadeexad ah oo lagu soo eedeeyay wiilka dhalin yarada ahaa ee ay Neymar hooyadii jacaylka la jilaysay, waxayna taasi keentay in go’aan deg deg ah ay Neymar hooyadii qaadatay.
Neymar Jr hooyadiis ayaa la shaaciyay inay iska caydhisay wiilkii yaraa ee ay xidhiidhka jaceyl wada lahaayeen ka dib markii ay ogaatay inuu xidhiidh la sameeyay ragg badan oo la soo bandhigay.
Neymar Jr oo magaceeda la yidhaa Nadine Goncalves oo 52 sanno jir ah ayaa labo isbuuc ka hor ku shaacisay bogeeda Instagram in xidhiidh jaceyl uu kala dhaxeeto 23 jirka Tiago Ramos oo aad uga yar wiilkeeda Neymar.
Warbaahinta dalka Brazil ayaa sheegeysa in Nadine ay iska ceyrisay 23 jirkaan ka dib markii ay ogaatay inuu xiriir midkeeda la mid ah la soo sameeyay rag badan ka hor inta aysan kulmin.
Tiago oo 23 sanno jir ah ayaa lagu eedeeyay inuu xiriir anshax xumo ah la yeeshay ninkii cuntada u karin jiray Neymar oo lagu magacaabo Mauro ka hor inta uusan xiriir jaceyl la bilaabin Neymar hooyadiis.
Waxaa sidoo kale la yeeshay in xiriir dadka isku jinsiga ah uu kala dhaxeeyay aktar caan ka ah Brazil oo isna lagu magacaabo Carlinhos Maia.
Neymar ayaa ku taageeray hooyadiis xiriirkeeda cusub ka dib markii ay baraha bulshada soo dhigtay sawiro iyada iyo 23 jirkaan ah.
Nadine waxa ay sannado ka hor kala tageen Neymar aabihiis iyagoo xiddiga Paris Saint-Germain uu Intagram ugu qoray: “Ii faraxsanow hooyo, waan ku jeclahay”
Laakiin wargeyska O Dia ayaa in qoyska Neymar hooyadiis ay ugu baaqeen inay soo gabagabeyso xiriirkaan fadeexada ah ee ay la leedahay wiilkaan.
Wiilkaan oo ku waalan ciyaarisyta ciyaar gacmeedka ayaa dib ugu laabtay qoyskiisa degan dalka Brazil ka dib markii laga ceyriyay guriga weyn ee ay degan tahay Nadine.
Si kastaba ha ahaatee, fadeexada wiilkan ku soo baxday ayaa la sheegay in ay sabab u noqotay burburka jacaylkii uu u hayay Neymar Jr hooyadii oo talaabo qaaday markii ay xogtaas heshay.